N'ùkwù N'ùkwù uru ahụ siri ike na Anadrol Oral Anabolic Steroids Oxymetholone CAS: 434-07-1 Onye nrụpụta na onye na-eweta |Taigui
Nweta ahụ akwara dị nro na Anadrol Oral Anabolic Steroid Oxymetholone CAS: 434-07-1
Aha ngwaahịa: Oxymetholone
Aha ọzọ: Anadrol
Nọmba ndebanye aha CAS: 434-07-1
Usoro ihe omimi:C21H32O3
Ibu ibu: 332.482
Ọdịdị molekụla: ☛
Ọdịdị: White crystalline ntụ ntụ.
Ojiji: eji dị ka ọgwụ ọgwụ, Oxymetholone na-eji agwọ ụdị ọrịa anaemia siri ike (enweghị mkpụrụ ndụ ọbara uhie), gụnyere aplastic anaemia, myelofibrosis, ma ọ bụ hypoplastic anaemia metụtara chemotherapy.
Otu esi echekwa: Chekwaa ọgwụ ahụ na 68 ° F ruo 77 ° F (20 ° C ruo 25 Celsius C) pụọ na okpomọkụ, mmiri na ọkụ.Debe ọgwụ niile ka ụmụaka ghara iru.Tụfuo ọgwụ ọ bụla a na-ejibeghị eme ihe mgbe ngafechara.Ejichala ọgwụ ndị a na-ejighị mee ihe ma ọ bụ wụsa sink ma ọ bụ igbapu.
20ml na 50 mg / ml
1 gram nke ntụ ntụ Oxymetholone
1 beaker kwesịrị ekwesị maka ijide olu nke mmiri mmiri
8.4 ml nke PEG 300
10.5 ml 190 Ihe akaebe mmanya mmanya 50ml @ 50mg/ml
2.5 grams nke Anadrol (2.5 ml)
2.5 ml nke BB
5 ml nke guaiacol
37.5 ml mmanụ
Anadrol (usoro onunu ogwu) okirikiri
Maka ụmụ nwoke, Dosages na-abụkarị 50-100 milligrams (mgs) kwa ụbọchị, na ọ na-emekarị stacked na ndị ọzọ mmiri bulking steroid dị ka testosterone na deca durabolin.
Maka ụmụ nwanyị, akụkọ ahụ dịtụ iche.Maazị Duchaine tụrụ aro ka ọ were 10mgs kwa ụbọchị maka ụmụ nwanyị, mana nke ahụ ka a nwalere ya na nrụpụta ahụ ya na ụmụ agbọghọ mma.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ Anadrol ga-achọpụta na ha na-eji steroid eme ihe kacha mma maka bulking cycles ma ọ bụ naanị maka akụkụ nke okirikiri ahụ maka oge dị mkpirikpi karịa ogologo oge n'onwe ya.
Anadrol cycles ekwesịghị ịgbatị karịa izu 4-6 n'ihi nsogbu hepatotoxicity.Otú ọ dị, ogige ndị ọzọ eji ya, dị ka injectables, nwere ike tinye n'ọrụ gafere oge njedebe Anadrol.
Obere doses Oke doses
Anadrol doses - Ogologo oge ojiji
N'ihi na ọtụtụ ndị ikom Anadrol doses na 50mg kwa ụbọchị ga-abụ ọkọlọtọ. Anadrol doses nke 25mg kwa ụbọchị , nwekwara ike ịbụ nnọọ uru na ịcha cycles,specifically asọmpi bodybuilding zoo cycles .Lower Anadrol doses nwere ike ime ka ndị dị otú ahụ dị mfe karị ịchịkwa. Anadrol doses nke 75-100mg kwa ụbọchị nwere ike iji ụfọdụ ndị ikom, Doses n'elu 100mg kwa ụbọchị ga-niile ma obi sie mmetụta.Ọtụtụ na-akọkarịkwa Anadrol doses n'elu 100mg kwa ụbọchị iji belata agụụ ha nke ukwuu, nke nwere ike ime ka uto sie ike. Nke a na-eme ka izu 4-6 bụrụ oge zuru oke maka ọtụtụ ụmụ nwoke.Ụdị oge a ga-eji eme ihe ga-abụ nke kachasị nchebe ma na-emepụta ihe niile achọrọ na nke a na-enweta na steroid a.
Onye mbido Anadrol Cycles Ihe Nlereanya okirikiri nke mbido Anadrol (ngụkọta oge okirikiri izu iri na abụọ)
- Testosterone Enanthate na 300 - 500mg / izu
Anadrol na 25-50mg / ụbọchị
Usoro Anadrol etiti Ọmụmaatụ okirikiri Anadrol etiti (oge okirikiri izu iri na abụọ)
- Testosterone Enanthate na 100mg / izu
Anadrol na 50 mg / ụbọchị
Usoro Anadrol dị elu Ọmụmaatụ okirikiri Anadrol etiti (oge okirikiri izu asatọ)
- Testosterone Propionate na 25mg kwa ụbọchị ọ bụla (100mg / izu)
Trenbolone Acetate na 100mg kwa ụbọchị ọ bụla (400mg / izu)
Anadrol na 100 mg / ụbọchị
Anyị nwere ike ịsị na ntụnyere n'etiti Dbol na Anadrol 50 zuru oke.Enwere otutu myirịta n'etiti steroid abụọ a, ọ bụ ezie na Anadrol sitere na Dihydrotestosterone na Dbol sitere na testosterone.
Anadrol bụ steroid gị mgbe ị na-ebuli ike ma ọ bụ na ịchọrọ inwe ike dị ukwuu, ngwa ngwa.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ uru ndị siri ike na obere bloating na akụkụ, gaa na dianabol.
Enweghị dublt na anadrol bụ nhọrọ kacha mma ma a bịa n'ịba ụba na ịnweta ngwa ngwa.Ọ nwere ike ime onye ọ bụla buru ibu ma buru ibu.
Nke gara aga: Ọnụ anabolic steroid ntụ ntụ Oxandrolone (Anavar) maka rFat Burning
Osote: CAS 10418-03-8 Steroid anabolic Oral Stanozolol Winstrol Maka Ịbelata okirikiri
CAS 10418-03-8 Steroid anabolic Oral Stanozolo...